XOG LA OGAADAY: Khilaaf culus oo ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Kheyre & Villa Somaliya oo jawi kacsan gashay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG LA OGAADAY: Khilaaf culus oo ka dhex-qarxay Farmaajo iyo Kheyre &...
Muqdisho (Halqaran.coom) – Warar lagu kalsoonyahay oo ay Halqaran.com ka haleyso xubno ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya, ayaa sheegaya, in uu khilaaf iyo kala shaki soo dhex-galay madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Xassan Cali Khayre, tan iyo markii Farmaajo la kulmay madaxweynayaashii isaga ka horreeyay ee Xassan Sheikh iyo Sheikh Shariif.
Sida lagu soo warramayo, khilaafkan ayaa la sheegayay in uu ka dhashay shaki uu Ra’iisul wasaare Khayre ka muujiyay, kulamadii dhexmaray Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee ka horreeyay, balse isaga aan wax door ah laga siin, islamarkaana booskiisi lagu beddelay Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
RW Xasan Cali Kheyre, ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyay bilaabay, abaabul xooggan oo ku wajahan in uu loollan adag la galo madaxweyne Farmaajo, isagoo aaminsan in uu jiro heshiis ka qarsoon oo ay si hoose u wada-galeen Farmaajo iyo madaxdii ka horraysay.
Dhankiisa, Fahad Yaasiin oo wakiil ka ah madaxweyne Farmaajo, ayaa dadaal badan ku bixinaya abaabul kale oo ka dhan ah Qorshaha Mr Khayre, kadib markii la ogaaday hawlaha uu wado Ra’iisul wasaaraha, waxaana sida la sheegayo labada dhinac la kala safan xubno ka tirsan Golayaasha Baarlamanka iyo sidoo kale Xukuumadda.
Sidoo kale, Khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha, ayaa saameyn xun ku yeeshay ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo bilaabay kala shaki iyo is kooxaysi ku aaddan in ay la kala saftaan labada mas’uul.
Xubno ka war-haya khilaafka Farmaajo iyo Khayre, ayaa rumaysan in uu salka ku hayo loollanka doorashada soo socota ee 2020/2021-ka, taasi oo mid walba shaki ka qabo kan kale, in uu hoose ka wato ajandayaal qarsoon, oo ku wajahan loollanka doorashadaasi.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Khayre, oo marar kala duwan ku faanay, in ay dhex-dooda muran iyo khilaaf ka ilaaliyeen, waxa haatan la sheegaya in khilaafkoodu gaaray heer aysan wada-hadlin.
Ugu dambeyn, khilaafkan ka dhex qarxay Farmaajo iyo Kheyre ayaan cidna qiyaasi karin halka uu ku dambeyn doono iyo cidda libintu ku raaci doonto loollanka adag dhex-dooda ka bilowday.
Hoggaamiyaha cusub ee ONLF oo si cajiib ah uga hadlay Khilaafka DF Soomaaliya iyo Jubbaland
XOG CUSUB: Xiisad ka dhalatay ciidankii Itoobiya ee ku qul-qulay Dhuusamareeb & Wararkii ugu dambeeyay
Faah-faahin cusub oo ku saabsan Dilkii galabta Muqdisho loogu geystay Jeneraal Yuusuf Cagaey
SAWIRRO: Golaha Aqalka sare ee BFS oo Ansixiyay Hindise-sharciyeedka maareynta iyo maaliyadda dalka
UPDATE: Jeneraal ka tirsan ciidanka Militariga oo gurigiisa Muqdisho lagu dhex-dilay, (Yaase dilay?)
XOG XASAASI + AKHRISO: Dowladda Soomaaliya oo Itoobiya u adeegsaneysa Doorashada maamulka Galmudug iyo Xiisad jirta
Maxaa ka jira in Puntland ay Xabsiga Boosaaso ku xirtay Nabaddoono (Ogow Sababta ka dambeysa!)
XOG: Xildhibaan Odawaa oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Madaxweyne Farmaajo‚‘‘ Waxaa Youtube-yada ka buuxa warkaadii shalay iyo dhaqankaagii maanta…‘‘
Uganda: ”Ka bixista AMISOM Somaliya yaan lagu xirin waqti, ee xaaladda dalka hala qiimeeyo!”
XOG CUSUB: Axmed Madoobe oo guul kula laabanaya Kismaayo iyo Villa Soomaaliya oo loo heshiiyay!
Farmaajo iyo Kheyre oo khilaaf ka dhex qarxay
Villa Soomaaliy oo laga yaaban yahay
Eerible Farnfar December 2, 2019 At 13:41
Farmaajo iyo Kheyre waa laba is-gaadaya. Midba yaan nabarka lagaaga horreyn buu is-leeyahay.
Wixii la qariyaba fashilkooda hada waa soo shaac baxay.
Kheyre inuu madaxweyne u tartamo ayuu rabaa. Farmaajana ma oggola in kursiga madaxweynaha uu Kheyre ku qasado.